Jehova agaghị agbanwe ihe o kpebiri ime ndị Izrel (1-9)
Jeremaya kwuru ihe na-enye ya nsogbu n’obi (10)
Ihe Jehova gwara Jeremaya (11-14)
Ekpere Jeremaya kpere (15-18)
Obi tọrọ Jeremaya ụtọ na o riri okwu Chineke (16)
Jehova mere ka obi sie Jeremaya ike (19-21)
15 Jehova wee sị m: “Ọ bụrụgodị na Mosis na Samuel dị ndụ taa na-arịọchitere ndị a arịrịọ,+ agaghị m emere ha ebere.* Ka a chụpụ ha n’ihu m. Ka a hapụkwa ha ka ha pụọ. 2 Ọ bụrụkwa na ha ajụọ gị ihe ga-eme ha, ị ga-asị ha, ‘Jehova kwuru, sị: “Ọrịa ga-egbu ụfọdụ n’ime unu. A ga-eji mma agha gbuo ụfọdụ n’ime unu.+ Ụnwụ ga-egbu ụfọdụ n’ime unu. A ga-adọrọkwa ụfọdụ n’ime unu n’agha.”’+ 3 “Jehova kwukwara, sị, ‘M ga-eme ka ọdachi anọ dakwasị ha.*+ A ga-eji mma agha gbuo ha. Nkịta ga-adọkpụrụ ozu ha. Nnụnụ na anụ ọhịa ga-adọri ha, laakwa ha n’iyi.+ 4 Ihe m ga-eme ha ga-eme ka ụjọ tụwa alaeze niile dị n’ụwa.+ M ga-eme ha ihe a n’ihi ihe Manase nwa Hezekaya, bụ́ eze Juda, mere na Jeruselem.+ 5 Jeruselem, ònye ga-enwere gị ọmịiko? Ònye ga-emetere gị ebere? Ònyekwa ga-abịa jụọ gị otú i mere?’ 6 Jehova kwuru, sị, ‘Ị hapụla m.+ Ị na-agbakụta m azụ.*+ N’ihi ya, m ga-eweli aka m mee gị ihe, laakwa gị n’iyi.+ Ike imere gị ebere agwụla m.* 7 M ga-eji fọk e ji afụcha ọka fụchaa ha n’ọnụ ụzọ ámá obodo a. M ga-agbawa ha aka ụmụ.+ M ga-ebibi ndị m,Ebe ọ bụ na ha ekweghị akwụsị àgwà ọjọọ ha na-akpa.+ 8 Ụmụ nwaanyị isi mkpe ha ga-ehi nne karịa ájá dị n’oké osimiri. M ga-eme ka onye na-ebibi ihe bịakwute ha n’etiti ehihie. Ọ ga-abịakwute ma ndị nne ma ụmụ okorobịa. M ga-eme ka ụjọ tụwa ha, obi awụnyekwa ha n’afọ n’otu ntabi anya. 9 Ike agwụla nwaanyị mụrụ ụmụ asaa. Ọ na-esiri ya* ike iku ume. N’agbanyeghị na ugbu a bụ ehihie, ọ nọ n’ọchịchịrị. E menyela ya ihere, mechuokwa ya ihu.’ ‘M ga-enyefe mmadụ ole na ole n’ime ha fọrọ n’aka mma agha ndị iro ha.’+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.” 10 Nne m, efuola m, maka na ị mụrụ m.+ Mụ na ndị obodo m niile na-ese okwu, na-alụkwa ọgụ oge niile. E nweghị onye m na-agbazinye ihe, e nweghịkwa onye na-agbazinye m. Ha niile na-abụ m ọnụ. 11 Jehova kwuru, sị: “N’eziokwu, m ga-emere gị ihe ọma. N’eziokwu, m ga-enyere gị aka n’oge ọdachi,Nyekwara gị aka n’oge ahụhụ ka onye iro ghara ime gị ihe ọ bụla. 12 Mmadụ ò nwere ike ịkụrisị ígwè,Ya bụ, ígwè si n’ebe ugwu, kụrisịakwa ọla kọpa? 13 M ga-eme ka ndị iro unu* bukọrọ akụ̀ unu na ihe ndị ọzọ unu nwere.+ Ha agaghị akwụ unu ụgwọ, kama, ha ga-ebukọro ha n’ihi mmehie niile unu mere n’ala unu niile. 14 M ga-ebunye ha ndị iro unuKa ha buru ha laa n’ala unu na-amaghị,+N’ihi na iwe m enwurula ọkụ. Ọ bụkwa unu ka m na-ewesa iwe.”+ 15 Jehova, ị ma ahụhụ m na-ata. Biko cheta m. Uche gị dịrịkwa n’ebe m nọ. Taa ndị na-akpagbu m ahụhụ.+ Ekwela ka m laa n’iyi maka na ị naghị ewe iwe ọsọ ọsọ. Chetakwa na ọ bụ n’ihi gị ka m ji edi mkparị niile a na-akparị m.+ 16 Jehova Chineke nke ụsụụ ndị agha, mgbe m hụrụ okwu gị, m riri ya.*+ Okwu gị meziri ka m na-aṅụrị ọṅụ, obi ana-atọkwa m ụtọ,N’ihi na m na-aza aha gị. 17 Anaghị m eso ndị na-eme oké oriri enwe aṅụrị.+ M na-anọrọ onwe m n’ihi na ị nọnyeere m. I meela ka iwe ju m obi n’ihi mmehie ha na-eme.+ 18 Gịnị mere ahụ́ na-egbu m mgbu anaghị akwụsị akwụsị, Ahụ́ m merụrụ ekweghịkwa ngwọta? O kweghị ala ala. Ị̀ ga-adị ka isi iyiNke mmiri na-anaghị adị na ya? 19 N’ihi ya, Jehova kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị lọghachi, m ga-akpọrọghachi gị. Ị ga na-ejekwara m ozi.* Ọ bụrụ na i mee ka ihe bara ezigbo uru dịrị iche n’ihe na-abaghị uru,Ị ga-abụ ọnụ na-ekwuru m. Ha ga-alọghachikwute gị,Ma gịnwa agaghị alaghachikwuru ha. 20 Jehova kwukwara, sị: “Emeela m ka ị ghọọrọ ndị a mgbidi ọla kọpa a rụsiri ike.+ Ha ga-alụso gị ọgụ,Ma ha agaghị emeri gị,+N’ihi na m nọnyeere gị. M ga-azọpụta gị, napụtakwa gị. 21 M ga-anapụta gị n’aka ndị ọjọọ,Napụtakwa gị n’aka ndị obi fere azụ.”
^ Ma ọ bụ “obi m agaghị adị n’ebe ha nọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “M ga-ekpe ha ụzọ ikpe anọ.” Na Hibru, “M ga-ahọpụtara ha ezinụlọ anọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ị na-ala azụ azụ.”
^ Ma ọ bụ “Ike ịgbanwe obi m agwụla m.”
^ Ya bụ, ndị Juda.
^ Ma ọ bụ “m nụrụ okwu gị, m buuru ya n’obi.”
^ Na Hibru, “Ị ga na-eguzokwa n’ihu m.”